ဤ ကမ္ဘာတွင် ဗုဒ္ဒသည် ထာဝရတည်မြဲ၍ တန်ခိုးရှိသောသစ္စာတရားတို့ကိုဖေါ်ထုတ်ခဲ့သည်.။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတို့
ဆုံး အဖြောင့်မှန်ဆုံးလူသားစာရင်းဝင်တဦးဖြစ်သည်။ ။(အဲလ်ဘတ်ဆွစ်ဇာ)
ဗုဒ္ဒ.၀ါဒသည် လူသမိုင်းတွင်.ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်မြင့်မားရေးနှင့်.စစ်မှန်သောယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားရေး
အတွက် အခြားသောသြဇာသက်ရောက်မှုများထက် ပိုမိုသြဇာသက်ရောက်စေခဲ့သည်။ ။(အိပ်ခ်ျ ဂျီ ၀ဲလ်)
ဗုဒ္ဒမြတ်စွာတွင်.ဒေါသအလျံထွက်သောအခါဟူ၍ မည်သည့်အခါမှမရှိချေ.ဘုရားရှင်၏နှုတ်တော်မှ အကြင်နာမဲ့သောစကားထွက်ပေါ်လာသည်ဟူ၍ မည်သည့်အခါမှ မရှိချေ။(DR အက်စ်ရာဓခရစ်ရ်ှနန်)
ဤအရာ လူသားသစ်ပင်မှာ နှစ်ပေါင်းကုဋေကုဋာ တကြိမ်သာပွင့်ခဲ့တာ ပညာရနံ့ မေတ္တာပျားရည်စက်များ လောကကိုပြည့်ဝစေတာ. လူသားပန်းတပွင့်ပါ.. ဘယ်..သူလဲ ?? ဗုဒ္ဒ..ဘုရား.ဂေါတမ ဘုရားပင်တည်း။ ။
Posted by ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး at 1:00 AM